30th March 2019 - Samasta Khabar
बिहानीपख पशुपतिनाथको दर्शन गरि आफ्नो भाग्य हेरौं : राशिफल (चैत्र १७)
मेष धर्म,कर्ममा रुची बढ्ने र शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । मेहनत गर्दा जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सक्छ । रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । वृष व्यापारमा मनग्ये धनलाभ हुनेछ । अरूको मुख ताक्ने बानीले आफ्नो काम अधुरो रहनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ। जोश जाँगर र उमंग बढ्ला । मिथुन राज्यस्तरबाट लोभ लाग्दा अवसर प्राप्त हुने सम्भावना छ । विद्या, बुद्धि र सन्तान सुख मिल्नेछ । अतिथिको रूपमा सत्कार पाइनेछ । कर्कट आफ्नो मिहिनेतबाट अरूले फाइदा उठाउने कोसिस गर्नेछन्। स्वास्थ्यमा हेलचेक्र्याइँ गर्दा काममा विलम्ब हुन सक्छ। सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्धमा चिसोपन…
Earthquake hits Papua New Guinea.
Earthquake of 6.1 magnitude hits Papua New Guinea’s New Britain Island. According to the US Geological Survey, the point of location is 186 km east of Kandrian. Till now, there are no reports of any kind of damage or injuries from the earthquake.
त्रिशुली जलबिद्युतको आइपिओ चाहे जति सबैले पाउने । कति कित्ता?
बर्तमान सरकारले लिएर आएको जनताको जलबिद्युत कार्यक्रम अन्तर्गतको पहिलो जलबिद्युत आयोजना त्रिशुली जलबिद्युत कम्पनीले निष्काशन गरेको पहिले सेयर आबेदन दिने सम्पूर्णले पाउने भएका छन् । सबैले नियुनतम २० कित्ता सेयर पाइने देखिएको छ भने अधिकतम ३० कित्ता पाउनेले गोलाप्रथा मार्फत पाउनेछन् । यो भने नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारि गरेको सेयर बाँडफांड निर्देशिका अनुसार बाडिने देखिन्छ। प्रतिकित्ता १० रुपैयाँको दरमा निस्काशन गरेकोले माग गरेको जति सम्पूर्णले सेयर पाउने भएका छन्। पहिलो चरणको निस्काशन गरेको सेयरमा ६ करोड ४५ लाख ५२ हजार ९ सय कित्ताको लागि १ लाख ५४ हजार ६ सय…